Zonke Imali Emhlabeni – FX-Consultant
Zonke Imali kanye Amafa Okwezwe kuboniswe Physical $100 Bills – Infographic
$100 – counterfeited Iningi imali ihlelo emhlabeni. Indlela esetshenziswa kabanzi isitoreji ukubaluleka emhlabeni ngoba abathengisi bezidakamizwa. Ugcina nezwe ezihambayo.
WeziNkulungwane Ten Dollars
$10,000 – Eyanele iholide elikhulu noma ukuthenga imoto eyisekeni. Cishe ingxenye eyodwa unyaka umsebenzi womuntu isilinganiso emhlabeni.
$1,000,000 – kuyinto esigcawini imali phansi.
Angamakhulu Million Dollars
$100,000,000 – Plenty to go around for everyone. Ufaneleka kahle ku-ISO / Military ejwayelekile Pallet obujwayelekile.
Omunye Billion Dollars
$1,000,000,000 – Le, yindlela amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu libukeka. 10 Pallets of $100 izikweletu.
Omunye Ithriliyoni Dollars
$1,000,000,000,000 – Lapho baphonsa emhlabeni izwi “ithriliyoni” efana akulutho, this is the realit of $1 izindodla zezimali. Isikwele Pallets ngakwesokudla $10 amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu. 100x ukuthi futhi une embhoshongweni $1 isigidintathu okungukuthi 465 izinyawo ubude (142 amamitha).
Igolide neSiliva konke tekusisa Umhlaba
Demonocacy.info isikunikezele izihloko zonke Igolide nayo yonke yesiliva Okwezwe. Lena okufingqiwe lemali elincane zegolide nezesiliva etholakala emhlabeni ngenhloso utshalomali. Inani silinganisiwe zonke Igolide utshalomali World $2.5 Ithriliyoni USD at $ 40 / igremu noma $ 1250 / ounce.
Kukhona kakhulu esiliva ngaphezulu emhlabeni kunegolide, kodwa ngoba zesiliva zesi ezishibhile igolide (ngaphansi kuka- $ 20 / oz e 2017), eziningi esiliva uye ayithole ngokungafanele elahlekile kulo isikhathi. Isiliva liyasetshenziswa kwezinga lemikhiqizo yezimboni. Inani lotshalo mali esiliva litholakale emphakathini kuyimali Akumangalisi encane. ohulumeni Umhlaba ungazindeli iyiphi izinqolobane zesiliva abalulekile, ngokungafani ngegolide.
Umhlaba Imali Supply:
Twenty ayisishiyagalombili – $28 Ithriliyoni kumisuka Imali
amahlanu – $50 Ithriliyoni e Bank Imali
Lena ingakanani imali emhlabeni. Akukhona konke ngokheshi ngokomzimba noma (njengoba kuboniswe ngenhla), iningi kangakanani digital:
Imali Base siqukethe imali aphethwe amabhange (etholakele Central yabo Amabhange lapho Amabhange ithengiswe Uhulumeni noma izibopho Corporate ukuba Amabhange yabo Central, imali iyatholakala abolekise ezizimele), imali egcinwe ku vaults yasebhange (ukheshe ngokomzimba) futhi imali ezandleni zabantu. Lokhu imali ayitholakali ATM.
Bank Imali siqukethe imali egcinwe ku amabhange bezinhlangano nabantu, etholakalayo ukuhoxiswa noma nini. Bank Money is also lent out by Banks to people and business’. Amabhange abe lama- reserve imfuneko (ngokuvamile 10%) ukuthi kufanele bangune esandleni. Uma wonke umuntu watimisela kuya ATM futhi ukudonsa konke, kwakuzoba oluqhutshwa ibhange.
amahlanu nesishiyagalombili $58 ithriliyoni – Ukubaluleka Zonke Uhulumeni Amabhondi Kuyi-Nguqulo Yezwe
izakhamuzi emhlabeni akhokhe inzalo kule imali eningi ngoba izikweletu adalwe ohulumeni ezweni labo.
Amabhondi Uhulumeni (izikweletu) kubhekwa “lempahla” ngoba Amabhondi (payers intela) ukhokhe inzalo emalini Ngaboleka imali. Owayebolekisile uthola isitifiketi (I Bond- isithembiso ukukhokha $$$ emuva + isithakazelo) e ukubuya.
Ngokuvamile Uhulumeni Amabhondi ezibhekwa ukutshalwa iphephile ingozi kancane yokungakhokhi ngoba Ohulumeni ungabhala imithetho emisha (ukwandisa & ukudala Izintela okungalindelekile) ukuthatha imali zabantu ngenkani (ngokuya esindayo: ukuphanga okusemthethweni). Enye kabusha izinkokhelo ukuthi AKUYONA evumayo ngakho zimali / ababolekisi ubani ozothola Reserve Federal “ukuphrinta” imali entsha, lokhu Zibaqeda isithunzi amandla okuthenga imali ngokusebenzisa wenzuzo abatshalizimali uthola emuva esingaphansi abakufaka. Lokhu ngokuvamile indlela ekhethwa ohulumeni.
Kungani kangaka Uhulumeni Nezikweletu? Ngenxa osopolitiki phezu-isithembiso izakhamuzi okusemandleni (HHAYI) ukuletha, benza kanjalo ukunqoba ukhetho. Uma Politicans uwine bona ukuboleka imali ukuze ukhokhele izithembiso zabo ukuze sigcine izithembiso. Bavame ukuboleka ukuzicebisa kanye crony yabo nozakwethu ubugebengu.
Eyikhulu eyishumi nesithupha $116 ithriliyoni – Zonke Amasheya Nama-bond Kwebhizinisi Umhlaba
Amabhondi Corporate zifana Uhulumeni Amabhondi, kodwa kuyingozi ngaphezulu. Izinkampani eziningi ezinkulu baphathe ingozi kude esingaphansi uboleka imali abantu– leli qiniso kwehlisa ingozi futhi ushayela phansi abolekise zenzalo. corporations Big kungaba ukuboleka imali angabacwasi ezishibhile kuqhathaniswa nabantu. Ngezinye izikhathi izinkampani ukuboleka imali yokuthenga emuva impahla yabo futhi ibenze isitokwe ukubaluleka up, ngu ekwandiseni ngakho abatshalizimali ngenkathi ngokwezimali gutting inkampani.
Izitoke lingashintsha kakhulu ukubaluleka, ngoba ukubaluleka kwabo abstract ngaphezulu- ukubaluleka kunqunywa P / E (Inani ukuze Amaholo) ratio futhi elindelekile isitokwe idividendi izinkokhelo.
abangamakhulu amabili ayisishiyagalolunye $290 ithriliyoni – Ukubaluleka zonke Lebhizinisi Private futhi Abadayisi bezindlu in the World
Uma angathanda ukuthenga umhlaba wonke, lena yimalini ungadinga.
$180 Ithriliyoni iwukuba Abadayisi bezindlu
$100 Ithriliyoni iwukuba Registered Lebhizinisi Private
$10 Ithriliyoni kuyinto izinhlangano Extralegal.
Lokhu inqwaba ezithile imali inikwe amandla ubunikazi yangasese futhi izinkampani ezizimele ngokusebenzisa capitalism.
Democratic capitalism ubhekwa uhlelo embi kakhulu kwezomnotho ngaphambi kokuthatha look at the izindlela. Democratic Capitalism was promoted by the Founding Fathers of USA. Ezinye ushayele Abasunguli Heroes, Okwamanje ezinye ukubabiza “abanikazi Nceku ongathandanga ukukhokha izintela UK”. Nguwena ongazikhethela.
Uhlelo lwe-capitalism Corporate ubhekwa uhlelo alawula United States okwamanje.
Uhulumeni wamaKhomanisi Ayembamba ukulawula yonke le mali (Ibhizinisi Abadayisi bezindlu) ngesisekelo sokuthi uhulumeni uyazi kangcono kunawe lapho ukutshala imali yakho, and the government would run all business and own all real estate.
Umgwaqo esihogweni njalo kwavula zinezinhloso ezinhle. A fool who thinks he knows is much more dangerous than a fool that knows he knows nothing.
Omunye $1 Ikhwadriliyoni – Ukubaluleka zonke Derivatives Kuyi-Nguqulo Yezwe
Lokhu kubonisa inani esinikelweko kuzo zonke Derivatives Kuyi-Nguqulo Yezwe (Casino isitayela yokubheja ifomu inkontileka, esenziwe amabhange). Izisetshenziswa ezilethwayo Uyi lokudlela esiyingozi. Ziyakwazi ngengqondo kodwa okwamanje SOMBHALO. Izisetshenziswa zemali kukhona yekhasino isitayela ukubhejela ukubaluleka yini zikhetha ukugembula, ngefomu inkontileka, esenziwe amabhange, luqashwe akekho (ngoba kakho ozwayo ngokucacile kuwebhu okwakuthandelene & lokudlela ka Izisetshenziswa ezilethwayo).
Khetha “okuthile” lenani, ukwenza ukubhejela inani lesikhathi esizayo “okuthile”, engeza inkontileka & une esuselwe. Amabhange ukwenza inzuzo omkhulu phezu nemikhiqizo, futhi lapho bubble Ukuvutha kungenzeka yabakhokhintela uzogcina nge umthethosivivinywa. Lokhu Ziveza umbiko ingqikithi nemikhiqizo (esinikelweko). Ngokufana Ukusabalala inkampani yomshuwalense sika ingqikithi bonke izimoto (akusho zonke umshwalense kuzo zonke izimoto sizokhokhelwa kanyekanye).
Ngezinye izikhathi Amabhange benze izivumelwano self-ukukhansela esuselwe. isibonelo: 2x Amabhange ufake Izinkontileka 2x:
Contract1 = Bank1 okhokhela $ 10M ukuba Bank2 uma intengo ukhuphuka
Contract2 = Bank2 okhokhela $ 10M ukuba Bank1 uma intengo ukhuphuka.
Lokhu 1000x bese ziya zigqaja nomunye ngobukhulu iphothifoliyo yabo esuselwe.
Akekho ungakwazi ukulandelela ngempela ngubani ukweleta yini kubani e Izisetshenziswa ezilethwayo, kungcono lokudlela elikhulu iyadida, kodwa umcimbi engashongo ezifana Fed uSihlalo we Janet Yellen ngokuzumayo ukhulisa senzalo ukuba 5% abengase kakhulu uwohloke lonke System esuselwe kanye Amabhange kanye ukuthi, ngoba ehlukahlukene nezinye izakhiwo kanye ezinye ebhange cishe abe isandla ezimbi kubhejwa esuselwe futhi hamba ayinamali.
Ezinye isiwula (mhlawumbe kwelinye ibhange) ngabe ungumnikazi amasheya le yimali ebhange kanye amafa, futhi nazo ucabanga. Lokhu kwakwenza ukulahlekelwa ithemba emabhange kanye wonke umuntu uzoqala edonsa imali yabo ephephile-aqaphe ke, okubangela nomphumela ehlukahlukene yebhange ngongakwazi ukukhokha izikweletu.
$1 Ikhwadriliyoni = $1000 izigidigidi = $1 Million Amabhiliyoni noma $1 Billion Izigidi
I Pyramid zezimali
I Pyramid zezimali yadalelwa nangama inhlangano empahla ngokuya ingozi kanye nosayizi. I Pyramid zezimali yadalwa ngesikhathi isikhathi United States, lapho dollar ngasinye elisekelwa Gold. Igolide wakha phansi elincane kakhulu ukubaluleka okuthembekile, futhi empahla emazingeni ngokuqhubekayo ephakeme ayingozi ngaphezulu. Usayizi enkulu amazinga empahla emazingeni aphezulu imelele ayanda Imininingwane emhlabeni wonke Inani esinikelweko walabo amafa.
Njengoba ubungozi kwezezimali inyuka, imali ivame ukuba ngithuthe amafa okuyingozi ngaphezulu (Izisetshenziswa ezilethwayo), kumavidiyo okungenani okuyingozi (ukuze imali ngokomzimba bese igolide). Ayikho into ngaphandle ingozi, kodwa ingozi isihlobo. Udaba wukuthi kukhona imali encane kakhulu ngokomzimba futhi Igolide ngisho kancane kuqhathaniswa amafa okuyingozi ngaphezulu, lokhu kwenza ukuba ukuhweba ophithizelayo izikhathi ingozi ephezulu lapho wonke umuntu efuna ukuba ungagxumeli imali negolide, ukusunduza up intengo.
I kancane isikwele yellow on phambi Ngakwesokunxele lonke igolide emhlabeni ngomzimba wenyama. Lonke igolide emhlabeni AKUYONA konke “kokutshala imali grade” ifomu.
I $1 Ikhwadriliyoni Derivatives imali odongeni zize ibanga, ngoba $1 Ikhwadriliyoni kuyinto ukulinganisa by abahlaziyi engcono iqiniso akekho owaziyo ngempela ubukhulu Derivatives Market kweqiniso.
yasekuqaleni ngesiNgisi ngokuphelele lapha: demonocracy.info